ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ဘယ်လိုသဘောနဲ့မေးကြ ပြောကြပါလိမ့်
ရေးသားသူ poemflower at Friday, April 17, 2009
Welcome April 17, 2009 at 10:47 AM
ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့ စာမှန်သမျှ နှစ်သက်တယ်၊ အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပြန်ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး ..
မောင်ကောင်း April 19, 2009 at 5:30 PM
တရား အားထုတ်တဲ့သူကို မလေးစားသော်လည်း တရားကို လေးစားကြရပါမယ်. . . .တဲ့
နှစ်သစ်မှာ အသိတရားလေးတွေ ကိုယ်သိသလို သူများကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက် သာဓု ခေါ်ပါတယ်အမ...
တရားနဲ့ နီးစပ်ပြီး.. တရားနဲ့ မွေ့လျော်တဲ့ မြန်မာအမျိုးကောင်းသမီးများ များများပေါ်ပေါက်ပါစေလို့.. နှစ်သစ်မှာ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
ဝလုံးဝိုင်းဝိုင်း April 20, 2009 at 2:17 PM
တရားဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်တာလေး မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ အစ်မ။ မှတ်သားသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ့ကိုမှ သီလသမာဓိ ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်အဆင့်ကို ရောက်နေ ပြီလို့ပြေလာလို့မရနိုင်ပါဘူး.။ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအားဖြင့် မြင့်မြတ်သူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တယ်။ ဘာညာ ဝေဖန် ပြောကြားခွင့် မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိအောင်ပဲ ကြိုစားသင့်တယ် ထင်မိပါတယ်။
အောင်မြေ April 21, 2009 at 1:32 PM
အောင်မြေ April 21, 2009 at 4:15 PM
ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့ ထွက်သမျှစာတွေ ၀ယ်စုထားဖြစ်တယ်။
အရေးအသားကောင်းတယ်၊ သမိုင်းအထောက်အထား ခိုင်လုံတယ်။
အိမ် April 22, 2009 at 1:03 PM
ညခင်း April 28, 2009 at 5:28 PM
သတိပဌာန်တရား အားထုတ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်သူတိုင်း ဒီအမေးကို မေးမြန်းခြင်းခံရပါတယ်။
ညခင်းရဲ့ တရားပြဆရာတော်က ပြောတာလေး က အမှန် ဆုံးပါပဲ။
ယောဂီတို့ သူများကို အပြစ်မပေးပါနဲ့ တဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်အမူအရာ နှုတ်မူအရာ ကို စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပါ။ ဝေဖန်ပြောဆိုသူ ကို ငရဲ မပေးပါနဲ့၊ စောင့်စည်းပါလို့ ဆုံးမ ဘူးပါတယ်။
(((သတိပေးတယ် ဆိုတာ လောကမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ကို ပေးတာဖြစ်ပါတယ်. . .)))
ရေးသားသူကော တင်ပြသူကော ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။